ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: May 2009
ရေးသားသူ may16 at Sunday, May 31, 2009 14 comments:
လွန်လေပြီးသောအခါ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တွင် "ပညာဗလ" အမည်ရှိ အမတ်ကြီးတစ်ဦးရှိလေသည်. . ထိုအမတ်ကြီးသည် ပညာညဏ်ကြီးလှသဖြင့် ဘုရင်မင်းမြတ်၏ အထူးမြှောက်စားခြင်းကို ခံရသည်. . .
အခြားအခြားသော အမတ်ကြီးများကလည်း "ပညာဗလ" အမတ်ကြီးအား အထူးပင်ရိုသေ လေးစားကြရာ အမတ်ကြီးမှာ ပညာမာန်တက်လျှက်ရှိသည်. . . .
တစ်နေ့တွင် "ပညာဗလ "အမတ်ကြီးသည် နောက်လိုက်တစ်ဦးနှင့်အတူ မြစ်ဆိပ်သို့ရောက်လာခဲ့သည်. . . နောက်လိုက်အား အမတ်ကြီးက "ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ ဟိုဘက်ကမ်းသို့သွားရန်လှေငှားခိုင်းလေသည်. "
မကြာမီ . . နောက်လိုက်မှ "မှန်လှပါဘုရား ဤသူငယ်မှတစ်ပါး အခြားသော လှေသမားများ မရှိကြောင်းပါဘုရားဟု "ဆိုကာ လူငယ်တစ်ဦးကို ခေါ်လာလေသည်. . .
အမတ်ကြီး က. . . . "သင်ဘာအလုပ်လုပ်သလဲ . . ."
လူငယ် . . . "သစ်ခုတ်ပြီး သစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းများလုပ်ပါတယ် . ."
အမတ်ကြီး . . . . "ငါတို့ကို ဟိုဘက်ကမ်းကို သင်ပို့နိုင်ပါသလား "
လူငယ် . . . . "ပို့နိုင်ပါတယ်. "
သစ်ခုတ်သမားသည် ပညာဗလ အမတ်ကြီးအား လှေပေါ်တွင်တင် ကာလှော်ခတ်ခဲ့သည်. .
အမတ်ကြီး . . . . "သင်စာပေကျမ်းဂန်တတ်သလား ."
လူငယ် . . . . "စာကြီးပေကြီးတော့မတတ်ပါဘူး သစ်ခုတ်ပြီး လှေလုပ်တတ်လို့ဟောဒီလှေဟာ ကျွန်တော့လှေပါ.".
အမတ်ကြီး . . . . "တယ်ညံ့သကိုး ဆေးဝါးပညာရောတတ်သလား . . ."
လူငယ် . . . . "ဆေးဝါးပညာမတတ်ပါဘူး လူတွေနေဖို့ အိမ်ဆောက်ပေးတတ်ပါတယ်. . . "
အမတ်ကြီး . . . . "တယ်ဖျင်းသကိုး ဗေဒင်ပညာကောတတ်သလား . "
လူငယ် . . . . "ဗေဒင်မတတ်ပါဘူး လယ်လုပ်တတ်လို့ ဆန်စပါးရပါတယ်. . . "
အမတ်ကြီး . . . . "တယ်အသကိုး ဒါကြောင့်သင်အလုပ်ကြမ်းသမားဖြစ်နေတာပဲ. . ."
လူငယ် . . . . "အမတ်ကြီး ဗေဒင်တတ်ပါသလား . . ."
အမတ်ကြီး . . . . "ဗေဒင်၊ ဆေးဝါး ၊စာပေ ပညာအားလုံး စွယ်စုံတတ်တယ်. . . "
လူငယ်. . . . " ဗေဒင်တတ်တယ် ၊ ဘယ်အချိန်မှာ လေမုန်တိုင်းတိုက်မလဲ ဟောပါ.. "
အမတ်ကြီး . . . . လေမုန်တိုင်းတိုက်တော့မလား အမယ်လေး ဒုက္ခပဲ. . . "
လူငယ် . . . . " မြစ်လယ်ကို လှေရောက်တဲ့အချိန်လောက်မှာ မုန်တိုင်းတိုက်မယ်. . "
သစ်ခုတ်သမားသည် ပြောသည့်အတိုင်း မြစ်လယ်သို့လှေရောက်သော အချိန်တွင် လေမုန်တိုင်းကြီး တိုက်ခတ်လာပါသည်. . .
အမတ်ကြီး . . . . "ဟာလေမုန်တိုင်း တိုက်လာပြီ. . . ဘုရား. . ဘုရား အမယ်လေး လှေနစ်တော့မယ် လှေမနစ်အောင် ကြိုးစားလှော်ပါ အမောင်ရယ် . . . . "
လူငယ် . . . . "စာပေကျမ်းဂန်ကြီးတွေထဲမှာ လှေမနစ်တဲ့နည်းမပါဘူးလားခင်ဗျာ. . "
အမတ်ကြီး . . . . "မပါပါဘူး အမောင်ရယ် အလှော်ကောင်းမှမနစ်မှာပါ . . . ."
လူငယ် . . . . "လှေနစ်မနစ်သိရအောင် ဗေဒင်တွက်ကြည့်ပါလား ကျွန်တော်က စာပေကျမ်းဂန်မတတ်ပေမယ့် လှေကို တော့ကောင်းကောင်းလှော်တတ်ပါတယ်. . ."
အမတ်ကြီး . . . . " ဒီအချိန်မှာ စာပေကျမ်းဂန်တတ်ဖို့ထက် လှေလှော်တတ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်. "
အမတ်ကြီး . . . "မောင်ရင်ဟာ ကျုပ်အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင်ပါ. . "
လူငယ် . . . . "ကျွန်တော်လူဖျင်းလူညံ့ဆို. . . "
အမတ်ကြီး . . "မောင်ရင့်ကြောင့်လူတွေ အိမ်ရတယ် ၊ စားစရာ ဆန်ရတယ် မောင်ရင်ဟာ အများရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါ. ."
လူငယ် . . . ." ဒီလိုကြားရတာ ၀မ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ . . . "
အမတ်ကြီး . . "မောင်ရင့်ကို အထင်သေးမိတာမှားပြီ တစ်ဦးခေါင်းတစ်ပညာ သူ့နေရာနဲ့သူ အသုံးကျတဲ့လူတွေ ကြီးပါပဲမောင်ရင်. . . "
ထိုနေ့မှစ၍ ပညာရှိအမတ်ကြီးသည်. . လူတိုင်းက သူ့ကိုလေးစားသလို သူကလည်း လူတိုင်းကို ပြန်လည်လေးစား လာလေသတည်း . . .
ရေးသားသူ may16 at Saturday, May 30, 2009 15 comments:
ရေးသားသူ poemflower at Thursday, May 28, 20096comments:
ကမြုးငယ် ခုန်သည်၊ လ နယုန် သည်ချိန်မို့၊
ရာသီငယ် မေထ၊ ဆယ့်နှစ်လမို့၊
ဇေဌပြောင်ရှိန်၊ တောက်လောင်ဝယ် ထိန်သည်၊
ရာဇိန္ဒနတ်ပိဋကတ်မှာ၊ မပြတ်ကယ်ထွက်စံ၊ စာညီလာခံလေ့ာခါ ၊
ဗိုလ်ခြံတဲ့ ရွှေလယ်မှာ၊ ငွေစံပယ်ဖြူ မုလေးက
နယုန်လသည် မြန်မာလများ၏ တတိယလဖြစ်၍ နွေဥတုတွင် ပါဝင်ပြီး မေလနှင့်ဇွန်လတွင်ကျရောက်သည်။ နွေရာသီကုန်ဆုံးရန် ၁၅ ရက်သာကျန်သော့သည့်ဖြစ်၍ "နွေနှောင်းလ၊ နွေစွန်လ" ဟု စာဆိုပညာရှင်များက စာဖွဲ့လေ့ရှိကြသည်.
ဒုတိယအင်းဝခေတ်သာလွန်မင်းတရားကြီး လက်ထက် သက္ကရာဇ် ၁၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် စာတော်ပြန်ပွဲများကို စတင်ကျင်းပခဲ့သည်. . ပရိယတ္တိသာသနာ တိုးတက်ပြန့်ပွားရန်နှင့် ပညာရှင်များ ထွန်းကားလာရန် ဟူသော ဆန္ဒမွန်ဖြင့် စာတော်ပြန်ပွဲကို နယုန်လ၏ ရာသီပွဲအဖြစ် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်. . . မြန်မာမင်းများသည် နယုန်လ စာတော်ပြန်ပွဲတွင် အောင်မြင်တော်မူကြသည်. ပဉ္စင်းလောင်း၊ ရှင်လောင်းတို့ကို ၀ါဆိုလတွင် ခမ်းနားကြီးကြယ်စွာ ပဉ္စင်းခံ၊ရှင်ပြုပွဲများ ပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိသည်. . .
ယခုအခါ ပထမပြန်စာမေးပွဲနှင့် ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲများ အပြင် တိပိဋကဓရ ရွေးချယ်ပွဲကြီး၊ အဘိဓမ္မာ စာမေးပွဲနှင့် ၀ိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲတို့ ကိုလည်း နှစ်စဉ်ကျင်းပပေးခြင်း၊ အောင်ဆုလက်မှတ်များ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းတို့ဖြင့် သာသနာတော် တိုးတက်စည်ကား ပြန့်ပွားရေးကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်. .
ထို့အပြင် သုံးလူ့ထွတ်တင် ဘုရားရှင်သည် နယုန်လပြည့်နေ့၌ စကြ၀ဠာ တစ်သောင်းမှ နတ်ဗြဟ္မာ အပေါင်းတို့ အား မဟာသမယသုတ်တော် ဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်းကို အစွဲပြု၍ "မဟာသမယ အခါတော်နေ့" ပွဲတော်ကို အနှစ်သာရပြည့်စွာ ကျင်းပကြပါသည်. . .
Nayon is the third month on Myanmar calendar, in the hot season, and falls in May-June.
In the second Innwwa Period, under the reign of King Thalun, in the year 1000 began the practice of holding examinations in religious scriptures in Nayon with aims at propagation of Pariyatti Sasana.
It was followed by the holding of novitiation and ordination ceremonies in the next month of Waso.
Nowadays, Pahtamabyan examinations, Dhammacariya Examinnations, Tipitaka Dhara Selection Examinnations, Abhidhamma and Vissudhi Magga Examinnations were held every year with presentation of prizes and certificates , for the flourishing of the Sasana.
Moreover, in this month of Nayon , what is called Maha Samaya Day was observed in commemoration of Lord Buddha's preaching of Mah Samay Sutta to celestial beings from ten thousand solar systems.
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, May 26, 20097comments:
အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦး၏ ယမမင်းထံ အစစ်ခံ သံပေါက်-
ယမမင်း ထံ အစစ်ခံရခြင်း
၁။ အိုကွဲ့ ယောက်ျား၊ မောင်လူသား၊ ဘယ်တရားများ ကျင့်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်မျိုးမှာ၊ လျှောက်စရာ၊ ဘယ်ဟာကိုမျှ မရှိတယ်။
၂။ ကုသိုလ်ကောင်းမှု၊ တစ်ခုခု၊ မပြုခဲ့လားကွယ်။
ယမရာဇာ၊ မေးသောခါ၊ ခမျာ မှိုင်၍နေရှာတယ်။
၃။ အမောင်ယောက်ျား၊ သတိထား၊ စဉ်းစားပါဦးကွယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၊ သာသနာ၊ မထွန်းပါလားကွယ်။
ကျွန်တော်တို့ရွာ၊ သာသနာ၊ ထွန်းလှပါတော့တယ်။
၄။ ပဗ္ဗဇ္ဇိ၊ ဒုလ္လဘ၊ မရခဲ့လားကွယ်။
သာသနာစက်၊ ရဟန်းဘက်၊ စိတ်မျှ မကွက်တယ်။
၅။ ရဟန်းဖြစ်မှာ၊ မင်းဆရာ၊ မဟောပါလားကွယ်။
ကျွန်တော့်ဆရာ၊ ဟောပြရှာ၊ နားမှာမဝင်တယ်။
ကျွန်တော့်စိတ်မှာ၊ သည်အခါ၊ ရွာသာ ရောက်တော့တယ်။
၆။ ယောက်ျားစစ်ပ၊ လှလှရ၊ မင်းဘဝကို နှမြောတယ်။
လူတို့ပြည်ရွာ၊ အမောင့်မှာ၊ ဘာများလုပ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်မယား၊ စားဖို့များ၊ ကြိုးစား လုပ်ခဲ့တယ်။
၇။ အမောင်,အမောင်၊ ယောင်တောင်တောင်၊ အမောင် မှားခဲ့တယ်။
သဒ္ဓါဖြောင့်တန်း၊ ဒါနခန်း၊ ပြောစမ်းပါဦးကွယ်။
သားကြီးရှင်ဖြစ်၊ ကျွန်တော်စစ်၊ ညှစ်၍ လှူခဲ့တယ်။
၈။ လှူသောအခါ၊ စေတနာ၊ သုံးဖြာညီလားကွယ်။
သုံးချက်စေတနာ၊ နည်းလှပါ၊ မှန်စွာ လျှောက်တော့မယ်။
ကျွန်တော့်အလှူ၊ ကြွေးတွေပူ၊ ငွေကူ မျှော်မိတယ်။
ကူငွေနှင့်သာ၊ ငါလှူတာ၊ ထေမိပါရင် တော်ရော့မယ်။
ကျွန်တော်မျိုးမှာ၊ သည်လိုသာ၊ အောက်မေ့မိပါတယ်။
၉။ ယုတ်မြတ်မဟူ၊ စားသောက်သူ၊ ကြည်ဖြူပါလားကွယ်။
ငွေကူများရာ၊ လူချမ်းသာ၊ မျက်နှာလိုက်၍ ကျွေးခဲ့တယ်။
မျက်နှာနည်းပါး၊ လူမွဲများ၊ မလွဲသာကျွေး ကျွေးခဲ့တယ်။
လူချမ်းသာပင်၊ မဏ္ဍပ်ဝင်၊ ဖျာလျှင်သင်ဖြူး ခင်းပေးတယ်။
သည်ကို ဟိုကို၊ ကြွပါဆို၊ ဗျို့ဗျာမစဲ ခေါ်ခဲ့တယ်။
ကွမ်းဆေးလက်ဖက်၊ ဆီစက်စက်၊ ဝက်နှင့်ကြက်သား ကျွေးခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်မျိုးမှာ၊ ငွေမျက်နှာ၊ သည်လိုဟာမှ သဒ္ဓါတယ်။
၁ဝ။ မင့်အလှူမှာ၊ ငွေတွေဟာ၊ နှမြောပါဘိကွယ်။
ပရိက္ခရာ၊ ဆောင်ရန်မှာ၊ ကောင်းစွာ လှူလားကွယ်။
ပရိက္ခရာ၊ ညံ့လှစွာ၊ ဖိုးချိုတာမှ ဝယ်ပေးတယ်။
၁၁။ လှူသောအခါ၊ ပစ္စည်းမှာ၊ စင်ကြယ်ပါလားကွယ်။
ကျွန်တော်လှူတာ၊ ပစ္စည်းမှာ၊ ခိုးတာများခဲ့တယ်။
၁၂။ ပစ္စည်းကုန်မှာ၊ မင်းလှူတာ၊ ဝမ်းနည်းပါလေတယ်။
ဘုန်းကြီးပင့်ခန်း၊ အလမ်းလမ်း၊ ပြောစမ်းပါဦးကွယ်။
အကျင့်သိက္ခာ၊ ရွေးချယ်ကာ၊ မြတ်ရာ ကိုယ်တော် ပင့်လားကွယ်။
သည်လိုဟာမှာ၊ မလေ့လာ၊ မျက်နှာ,နာမှ ပင့်ခဲ့တယ်။
နှုတ်ဆက်ခေါ်ငင်၊ မျက်နှာရွှင်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းလို့ ထင်ခဲ့တယ်။
သည်လိုဆရာ၊ ကျွန်တော့်မှာ၊ များစွာပင့်ခဲ့တယ်။
တို့အမျိုးပါ၊ တို့ဆရာ၊ တို့ရွာကိုယ်တော် ပင့်ဦးမယ်။
ပြောင်းနှင့်စပါး၊ မင်းတို့များ၊ ဘယ်လောက်ရလားကွယ်။
ကျောင်းကိုများသွား၊ ရယ်ဟားဟား၊ လက်ဖက် ကွမ်းစားတယ်။
ငှက်ပျော အုန်းသီး၊ ဒကာကြီး၊ မြည်းစမ်းပါဦးကွယ်။
သည်လိုခေါ်ဆို၊ မျက်နှာချို၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှ ပင့်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ရွာ၊ လှူကြတာ၊ သည်လိုချည်းသာ ပင့်ကြတယ်။
၁၃။ အမောင်လှူတာ၊ ဗလချာ၊ တန်ပါဦးတော့ကွယ်။
အင်္ဂါငါးလီ၊ ပဉ္စသီ၊ ဆောက်တည်မြဲလားကွယ်။
သီလငါးပါး၊ ကျင့်တရား၊ ပျက်ပြားများခဲ့တယ်။
သက်သတ်ခိုးမှု၊ ကာမေသု၊ တစ်ခုမကျန် ပေါက်ခဲ့တယ်။
မုသားသေရည်၊ ဤနှစ်လီ၊ ဝသီရှိတိုင်း ကျင့်ခဲ့တယ်။
၁၄။ ဖြစ်ခဲလေစွ၊ လူ့ဘဝ၊ သနားလှတော့တယ်။
ကျွန်တော်ချည်းသာ၊ မဟုတ်ပါ၊ လူတကာလည်း ပျက်ကြတယ်။
မိန်းမတွေဟာ၊ ပျက်လိုက်တာ၊ ဈေးဝယ်တာတောင် ရန်ဖြစ်တယ်။
၁၅။ သည်မှတစ်ခန်း၊ ရှေ့သို့လှမ်း၊ မေးစမ်းပါဦးမယ်။
ဘုရား တရား၊ သံဃာများ၊ ဝပ်တွားပါလားကွယ်။
ဘုရားဖူးများ၊ တဟားဟား၊ ပျော်ပါးရအောင်လိုက်ဖူးတယ်။
၁၆။ လိုက်သောအခါ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓါ၊ ကြည်ညိုလှစွာ ဖူးလားကွယ်။
ဗုဒ္ဓဂုဏော၊ စိတ်မစော၊ ရယ်မော စားသောက် ပြန်ခဲ့တယ်။
၁၇။ မာတာပိတ၊ မိနှင့် ဖ၊ ညွတ်တွား ခယ ပါလားကွယ်။
မညွတ်ခ,ဘဲ၊ ကျွန်တော်လည်း၊ ဆဲတောင် ဆဲသေးတယ်။
၁၈။ မှားစွမှားစွ၊ မောင်ဗာလ၊ သနားပါဘိကွယ်။
တရားတော်မှာ၊ ဒေသနာ၊ ကြားနာရဲ့လားကွယ်။
စိတ်ကမပါ၊ ရှက်လိုက်တာ၊ လူဆိုမှာကြောင့် နာဖူးတယ်။
၁၉။ နာသောအခါ၊ မင်းစိတ်မှာ၊ သဒ္ဓါကြည်နူး ရှိလားကွယ်။
ကယောင်ချောက်ချား၊ စိတ်ကသွား၊ တောထဲများတောင် ရောက်သေးတယ်။
၂ဝ။ ပုဂ္ဂိုလ်များစွာ၊ ဟောကြားပါ၊ သည်တစ်ခါလားကွယ်။
ကျွန်တော်မျိုးမှာ၊ သည်တစ်ခါ၊ လူမျက်နှာကြောင့် လိုက်သေးတယ်။
၂၁။ သည်တစ်ခါ,နာ၊ အမောင်မှာ၊ ကြည်ညိုပါလားကွယ်။
တရားလည်းချ၊ အိပ်ရေးဝ၊ ထ၍ ပြန်ခဲ့တယ်။
မိန်းမတွေဟာ၊ ငိုက်လိုက်တာ၊ ကျွန်တော့်ထက်တောင် သာသေးတယ်။
၂၂။ စံကျောင်းဝိဟာ၊ မြတ်သံဃာ၊ ဆည်းကပ်ပါလားကွယ်။
ဆွမ်း မုန့် ငှက်ပျော၊ ကျောင်းမှာပေါ၊ ရော၍လိုက်ဖူးတယ်။
၂၃။ လိုက်သောအခါ၊ ထေရ်သံဃာ၊ ရဟန္တာသို့ ထင်လားကွယ်။
ဘုန်းကြီးနားမှာ၊ မရောက်ပါ၊ တော်ရာချောင်က ခိုခဲ့တယ်။
၂၄။ ခိုသောအခါ၊ မင့်စိတ်မှာ၊ ကြည်ညိုပါလားကွယ်။
ကြည်ညိုဝေးကွာ၊ ကျွန်တော့်မှာ၊ စားစရာသာ ကြည့်ခဲ့တယ်။
သူရကာယ်ပင်၊ ကျိုးမမြင်၊ ဘုန်းကြီးကပင် နှမြောတယ်။
သည်လိုများပေ၊ ကျွန်တော်လေ၊ ဆိုတောင်ဆိုမိတယ်။
ကျွန်တော်ချည်းသာ၊ မဟုတ်ပါ၊ သူတကာလည်း ဆိုကြတယ်။
၂၅။ ကျောင်းပစ္စည်းများ၊ အမောင်အား၊ မစားမသောက် ကင်းလားကွယ်။
စားသည့်ထမင်း၊ ဝမ်းတောင့်တင်း၊ ကျောင်းကအနိုင် ဆင်းခဲ့တယ်။
၂၆။ စားသည်မယွင်း၊ ကျောင်းတလင်း၊ ခတ်ခြင်း တံမြက် လှည်းလားကွယ်။
မလှည်းမိပါ၊ ကျွန်တော့်မှာ၊ စားပြီး သောက်ခါ ပြန်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ရွာ၊ လူတွေဟာ၊ သည်လိုချည်းသာ စားကြတယ်။
၂၇။ အမောင် ယောက်ျား၊ မင်းဖြစ်ငြား၊ သနားပါဘိတယ်။
ဥပုသ်စောင့်ခန်း၊ ရှေ့သို့လှမ်း၊ မေးစမ်းပါဦးမယ်။
ဥပုသ်အင်္ဂါ၊ အရိယာ၊ ဖြူစွာသီလ စောင့်လားကွယ်။
ဘုန်းကြီးများထံ၊ သီလခံ၊ ကြွက်ဆူညံအောင် ပြောခဲ့တယ်။
၂၈။ ပြောသောစကား၊ မင်းဖြစ်ငြား၊ တရားကြောင်းလားကွယ်။
လယ်,ယာ,ကျွဲ,နွား၊ ပြောင်းစပါး၊ သားမယားကြောင်း ပြောခဲ့တယ်။
စပ်မိစပ်ရာ၊ ပြောလိုက်တာ၊ နွားချင်းလဲရာ ရောက်သေးတယ်။
စကားမဆုံး၊ တစ်နေ့လုံး၊ အုံးအုံးကြွက်အောင် ပြောခဲ့တယ်။
သည်လိုနှင့်ပင်၊ နေသာဝင်၊ အိမ်လျှင်ပြန်ခဲ့တယ်။
ဥပုသ်စောင့်ရာ၊ ပြောကြတာ၊ မိုးမရွာကြောင်းသာ များကြတယ်။
၂၉။ သီလပြောက်ကြား၊ စောင့်လေငြား၊ မိုးကား ကွက်ကြားရွာတတ်တယ်။
မင်းတို့လူ့ဘောင်၊ သီလကြောင်၊ မိုးရှောင်ကွင်းတတ်တယ်။
မင်းတို့ဖြစ်ပုံ၊ အလုံးစုံ၊ အကုန်တွေးပကွယ်။
မင်းတို့စောင့်တာ၊ ဥပုသ်မှာ၊ ထမင်းဆာတာ သနားတယ်။
ဘာဝနာလမ်း၊ ကမ္မဋ္ဌာန်း၊ စီးဖြန်းပါလားကွယ်။
ဘာဝနာလမ်း၊ ကမ္မဋ္ဌာန်း၊ စီးဖြန်းနည်းခဲ့တယ်။
၃ဝ။ တရားစကား၊ အမောင့်အား၊ ဆွေးနွေးပါလားကွယ်။
တတ်သည်ဆိုလျှင်၊ ကျွန်တော်ပင်၊ အလွန်မေးချင်တယ်။
၃၁။ မေးသောအခါ၊ မင်းစိတ်မှာ၊ ဘာဝနာလားကွယ်။
မဖြေနိုင်က၊ အရှက်ရ၊ နာမည်ပျက်အောင် မေးခဲ့တယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ၊ ကျုပ်တို့ရွာ၊ စာ စကားသာ ပြောကြတယ်။
သင်္ဂြိုဟ်ဘေးပေါက်၊ ကောက်သင်းကောက် ရောက်မိရောက်ရာ ငြင်းကြတယ်။
ကျွန်တော်ကတောင်၊ တတ်ဟန်ဆောင်၊ ဖောင်ဖောင်လန်အောင် ငြင်းခဲ့တယ်။
၃၂။ ငြင်းသောအခါ၊ မင်းစိတ်မှာ၊ ဘယ်လိုပါလဲကွယ်။
ကျွန်တော်ကပင်၊ ဂုဏ်လိုချင်၊ တတ်သည်ထင်အောင် ငြင်းခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ရွာ၊ လူတွေဟာ၊ စာငြင်းတာနှင့် ရန်ဖြစ်တယ်။
၃၃။ အမောင်ယောက်ျား၊ လျှောက်စကား၊ အမှားတွေသာ များခဲ့တယ်။
အားကိုးစရာ၊ ကုသိုလ်မှာ၊ ဘယ်ဟာကိုမျှ မရှိတယ်။
တစ်ခုကိုမျှ၊ မေးမရ၊ ဝမ်းနည်းလှချေတယ်။
အမောင့်ဖြစ်ထွေ၊ သနားလေ၊ လူ့ပြည်မယား မကယ်တယ်။
မကယ်ဖြစ်တာ၊ မင်းတစ်ခါ၊ ကြမ္မာမှောက်တော့မယ်။
အမောင့်ဖြစ်ပုံ၊ အလုံးစုံ၊ အကုန်သနားတယ်။
ယမရာဇာ၊ မေးသောခါ၊ ခမျာမှိုင်၍ နေတော့တယ်။
သည်သောအခါ၊ ငရဲရွာ၊ ဆွဲကာချတော့တယ်။
ယမမင်းထံ အစစ်ခံ သံပေါက် နိဋ္ဌိတံ။
လင်္ကာရေးသူ အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦး။
ရေးသားသူ may16 at Saturday, May 23, 2009 12 comments:
၅။ လုမ္ဗနီဥယာဉ်၌ ဘုရားအလောင်း ဖွားမြင်တော်မူပုံ။
ဘုရားအလောင်းပဋိသန္ဓေနေ၍ ဆယ်လပြည့်ရာ ကဆုန်လပြည့်အခါဝယ်၊ မယ်တော်မာယာ သည် ဆွေတော်မျိုးတော်များ၏နေရာ ဒေ၀ဒဟပြည်သို့ သွားလိုပါကြောင်း သုဒ္ဓေါဒနမင်း အားခွင့်တောင်းလေသည်. . သုဒ္ဓေါဒနမင်းသည် ကပိလ၀တ်ပြည်မှ ဒေ၀ဒဟ ပြည်သို့ သွားသောလမ်းတစ်လျှောက်လုံး တန်ဆာဆင်စေ၍ မင်းခမ်းမင်းနားဖြင့် ထွက်တော်မူစေလေရာ ခရီးအကြား၌ လုမ္ဗနီအင်ကြင်းဥယာဉ်တော်ကို ခေတ္တ၀င်တော်မူ လေသည်. . .
ထိုအချိန်မှာ ဥယာဉ်တစ်ခုလုံး၌ အင်ကြင်းပန်းတွေပွင့်နေသဖြင့် အလွန်သာယာလှပေသည်. . . မယ်တော်မာယာသည် အင်ကြင်းကိုင်း ကို လက်တော်ဖြင့် လှမ်းလိုက်တုန်းမှာ ၀မ်းတော်လှုပ်လာသောကြောင့် အ၀တ်အကာအရံကို ကာရံစေကာ မတ်တပ်ရပ်လျက်သာလျှင် ဘုရားအလောင်းတော်ကို ဖွားမြင်စေလေသည်. . ထိုအခါ ဗြဟ္မာမင်းများက ရွှေဇာတဘက်ဖြင့် ခံယူ၍ မယ်တော်ရှေ့၌ပြကာ "ဘုန်းတန်ခိုးရှိသော သားရတနာ ဖွားဖြင့်ပါပြီ "ဟု ပြောဆိုကြလေသည်. . .
Queen Maha-Maya carried the future Buddha in the her womb for ten months; and on the full moon day in May (Vesak) she said to Kind Suddhodana " I wish , O King to go to Devadaha, the city of my family". The king approved and caused the road from Kapilavatthu to Devadaha to be made smooth and adorned, and sent her withagreat retinue. Between the two cities there wasapleasure grove of sal trees, called Lumbini Grove .
She entered the grove forarest. And at this particular time, this grove was one mass of flowers presentingavery preety scene. She went to the foot ofagreat sal tree and reached out her hand to seize hold of one of its branches. She was at once shaken with the pains of the birth. Thereupon the people hungacurtain about her, and her delivery took place while she was standing up. Athe that monent came four Mahabrahmas (higher gods) withagolden net; and receiving the Furture Buddha with it , they placed him before his mother and said, " Rejoice, O Queen!. A mighty son has been born to thee."
ရေးသားသူ may16 at Friday, May 22, 20096comments:
ကျားသစ်တွေဟာ ခြင်္သေ့တွေလိုပဲ ၊ အရောင်က ညိုညစ်ညစ်နဲ့လှတာမဟုတ်ဘူး သစ်ကုလားအုတ်တွေလို မြင်းကျားတွေလို မလှပတဲ့သူ့ဘ၀ကို တွေးပြီး ကျားသစ်ခမျာ စိတ်လက်မသာမယာဖြစ်နေတယ် . . ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စကို ကျားသစ်က ဘယ်သူ့ကိုမျှ အသိမပေးဘူး . . . သူ့ဘာသူ ကြိတ်ခံစားနေရှာတာ
တစ်နေ့မှာတော့ သူဟာ လမ်းလျှောက်ထွက်လာရင်း မြွေတစ်ကောင်နဲ့က တွေ့သတဲ့ ဒီအခါ မြွေက '"အလို ကိုကျားသစ် လို့ ချည့်နဲ့နဲ့လေသံနဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်သတဲ့. "
"ကျွန်တော် တော်၂လေးနေမကောင်းဖြစ်နေတယ် အခြေအနေမကောင်းဘူး . . ဘယ်သူ့မှလည်း မကူညီကြပါဘူးဗျာလို့ အားငယ်တဲ့လေသံနဲ့ ပြောပြန်တယ်. . . "
"ဒါလားမဆန်းပါဘူးကွာ " လို့ ကျားသစ်က ဂျစ်ကန်ကန်နဲ့ပြန်ပြောတယ် . "မင်းလို အယုတ်တမာကောင်မျိုး အခြားကောင်တွေကကြောက်နေတာကွာ ဘယ်သူက မင်းကို ကူညီမလဲ ဒါပေမယ့် မင်းနေမကောင်းတုန်းတော့ ငါကူညီပါ့မယ်ကွာ . . လို့" ကျားသစ်ကပြောပြီး စေတနာနဲ့က ကူညီပေးတယ် . .
မြွေပြန်ပြီးနေကောင်းလာတဲ့အထိကို စောင့်ရှောက်ပြုစုပေးနေတာ . . ဒီလိုနဲ့မြွေနေကောင်း လာတယ် . . မြွေဟာ ကျားသစ်ကို ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ . "ခင်ဗျားရဲ့စေတနာကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ခင်ဗျား လိုချင်တာတစ်ခုကို ကျွန်တော်ပေးပါရစေဗျာလို့ "ပြောသတဲ့ . . . .
ဒီတစ်ခါ ကျားသစ်က "မင်းမတတ်နိုင်ပါဘူးကွာလို့ ငါက လှလှပပ အရေပြားရှိချင်တာ. . . လှပတဲ့ အရေပြားမရှိတဲ့ ဘ၀မှာ ဘာရရ အဓိပ္ပါယ် မရှိပါဘူး လို့ . . . ညည်းညည်းညူညူ ပြောတယ် ". . .
ဒီအခါ မြွေက "ကျွန်တော်ခင်ဗျားကို လှလှပပ အရေပြား ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်ကိုက်မယ် ဒါပေမယ့် မကြောက်နဲ့နော် ခင်ဗျားကို အဆိပ်မသင့်စေရဘူး . . ခင်ဗျား ကိုယ်ပေါ်မှာ လှလှပပ အစက်အကွက်တွေ ပေါ်လာရုံကိုက်မှာ တစ်ကိုယ်လုံး အ၀ါလေးတွေ ၊ အနီလေးတွေ အညိုလေးတွေ အစပ်ဟပ်တည့်တည့်နဲ့ကို လှနေမှာနော်လို့ "ပြောပြတယ်. . .
ဒါနဲ့ မြွေဟာ ကျားသစ်ကို ကိုက်ခဲလိုက်တယ် . . တကယ့်ကိုပဲ ကျားသစ်ရဲ့ အရေပြားပေါ်မှာ ချက်ချင်း ဆိုသလို လှပတဲ့ အစက်အကွက်တွေ ပေါ်လာပါရော . . ဒီအချိန်ကစလို့ ကျားသစ်တွေမှာ အခြားသတ္တ၀ါတွေထက် လှပတဲ့ အရေပြားတွေရှိလာခဲ့တယ် . . . မြွေနဲ့ကျားသစ်ဟာလည်း တကယ့်ကို မိတ်ဆွေရင်းချာတွေဖြစ် သွားတော့တယ် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မကောင်းမကြံကြဘဲ ထာဝရ ခင်မင်ရင်းနှီးသွားကြသတဲ့ကွယ် . . .
စိုးထိုက် (Happy Time မဂ္ဂဇင်း)
ရေးသားသူ poemflower at Thursday, May 21, 2009 12 comments:
သူတော်ကောင်းတို့ကိုသာ ပေါင်းဖော်ရာ၏ . . .
သူတော်ကောင်းတရားကို သိရ၍ မြင့်မြတ်၏. . .
Associate only with the virtuous.
Knowing Dhamma from the virtuous is virtuous.
သူယုတ်မာတို့နှင့် ပေါင်းဖတ်ခြင်းကို စွန့်လွှတ်လော့ . . .
သူတော်ကောင်းကို ပေါင်းဖက်အပ်သူကို သာ ဆည်းကပ်လော့ . . .
ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို အစဉ်အမြဲ ပြုလော.့ . .
မမြဲသော အဖြစ် (သင်္ခါရတရား) ကို အစဉ်အမြဲ အောက်မေ့ဆင်ခြင်လော့ . . .
A bandon association with the wicked.
Approach only the virtuous who should be associated with
Always be mindful of the law of impermanence (Sandhara Dhamma).
သူယုတ်တို့သည် ရေသဖန်းသီးမှည့်နှင့် တူ၏ အပြင်ပန်းအားဖြင့် အဆင်းရှိသော်လည်း အတွင်း၌ မူကား ပိုးလောက်များဖြင့်သာ ပြည့်ကုန်၏. .
The wicked are like ripe figs goodlooking outside but full of worms inside.
ပိန္နဲသီးမှည့်တို့သည် ပြင်ပ၌ဆူးများ ရှိသော်လည်း အတွင်းအရသာမူကား ချိုမြိန်လှပေ၏. .
သူတော်ကောင်းတို့၏ စိတ်နှလုံးသည်လည်း ထို့အတူပင်ဖြစ်၏. . .
Though jack fruits have thorns outside the taste is sweet.
So also are the hearts of the virtuous
ပညာရှိသူတော်ကောင်းသည် ဘေးဒုက္ခဆင်းရဲသို့ ကျရောက်ငြားသော်လည်း သူတော်ကောင်း တရားကို မစွန့်.
The wise and virtuous does not abandon virtue even when in trouble.
င်္ခြသေ့တို့မည်သည် ငတ်မွတ်ဆာလောင်သော်လည်း မြက်သစ်ရွက်ကိုမူ မစား. . .
ပညာရှိ သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်း ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရသော်လည်း မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကို လက်မခံ အကျင့်သီလကို စောင့်ထိန်းကြကုန်၏
Lions, though hungry will not eat grass.
The learned and virtuous though faced with poverty will not accept badness but always upholds virtue
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, May 19, 2009 10 comments:
Happy Birthday May16 !!
Birthday Flower လေးလည်း အရင်ပေးပြီး မွေးနေ့ရှင်ကို အနမ်း ၁၀၀၀ နဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်.. မင်္ဂလာပါ may16
ဒီနေ့ကတော့ ညီမ may16ရဲ့ မွေးနေ့ပါ.
( ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ထားတာတော့မဟုတ်ပါ ) ညီအကိုမောင်နှမအားလုံးကို အစားအသောက်တွေနဲ့ဧည့်ခံပါတယ်ရှင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စားသွားကြပါနော်
အင်္ကျီလေးရယ် ၊နာရီလေးရယ်၊ ပိုက်ဆံအိပ်ရယ်၊နေကာမျက်မှန်ရယ်. ဒီမွေးနေ့လက်ဆောင်တွေက ကျွန်မ၀ယ်လာခဲ့တာပါ..
မွေးနေ့ကိတ်ကို လည်း သူ့အတွက် Order မှာထားတာပါ
ဒီကိတ်ကို သူကိုယ်တိုင်ခွဲပြီးကျွေးမှာပေါ. အားလုံး ကို အဝေတည့်အောင်ကျွေးမှာပါ မလုနဲ့နော် :P
မွေးနေ့ပွဲလာတဲ့လူတွေရောက်ရောက်ချင်း အမောပြေအောင် အအေးနဲ့ အသီးလေးတွေ
သူငယ်ချင်း အမျိုးသားတွေအတွက်တော့ အရက်နဲ့ဘီယာ ကြိုက်တာသောက်နော်.
အမြည်းကတော့ အာလူးကြော်နဲ့ဆာတေး၊ပုဇွန်ကြော်၊ ကြက်ကြော်၊ထမင်းလိပ်
သီးစုံကြော်နဲ့ ဟော့ပေါ့တွေကို စီစဉ်ထားတယ်..
အချိုပွဲတွေလည်းစားအုံးနော် ကျွန်မကြိုက်တာတွေပဲစီစဉ်ထားတယ် (တော်၂ကောင်းတယ်နော်)
ကျောက်ကျော၊ လက်ဖက် ကိတ်မုန့် ၊နာနာတ်သီးတွေလည်း အားပေးပါအုံးနော်..
အသီးနဲ့အစားပိတ် အအေးလေးကိုလည်း အားပေးပါအုံး
မေ၁၆ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, May 16, 2009 20 comments:
"စကား စကားပြောပါများ စကားထဲက ဇာတိပြ" ဟူ၍ ဆိုရိုးရှိသည်. . "စကားနောက် တရားပါ" ဟူ၍လည်း ဆိုလေ့ရှိ ကြသည်. . ." ကြမ်းကျွံသော် နုတ်၍ရသည် စကားကျွံသော နုတ်၍မရ "ဟူသော ဆုံးမစာလည်း ရှိသည်. . "နှုတ်ချို သျှိုတစ်ပါး ချီးမွမ်း စေလိုလျှင်လည်း ခံတွင်းလက်လေးသစ်၊ ကဲ့ရဲ့စေလိုလျှင်လည်း ခံတွင်းလက်လေးသစ်" စသည်ဖြင့်လည်း . စကားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစဉ်အလာ အယူအဆ များရှိကြသည်. . .
ဤသို့လျှင် စကား၏ လေးနက်မှုများကို မြန်မာရှေးပညာရှိတို့က အနည်းနည်း အဖုံဖုံ ဥဒါန်းထားခဲ့ကြပြီးနောက် "ဆိုခဲစေမြဲစေ" ဟူသော ဆုံးမစကားကို ထားရစ်ခဲ့ကြသည်. .
စကားဟူသည် ပြောသူ၏နှုတ်ကထွက်မှ စကားဖြစ်သည်. . မနောတည်းဟူသော စိတ်အာရုံထဲ၌ ရှိနေရုံဖြင့် စကားမဖြစ်၊ နှုတ်မှ ပြောလိုက်မှသာ ၀စီကံမြောက်သည်. . ပြီးလျှင် ကာယကံမြောက် ဆောင်ရွက်မှုပြုရသည်. . .
အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းများတွင် နှုတ်ကတိကို ထား ၍ လုပ်ကိုင်နေကြသူများစွာ ရှိသည် . . နှုတ်ကတိစကားကို အပျက်မခံဘဲ တည်ကြည် ဖြောင့်မတ်စွာ လုပ်ကိုင် သူများသည်. ရေရှည် ကြီးပွားတိုးတိုက်လျက်ရှိကြသည်. .
အချိုးလူများကမူ တစ်နပ်စား ညဏ်ဖြင့် စကားကုလားဖန် ထိုး၍ မရိုးမသား စီးပွားရှာတတ်ကြသည်. . ထိုသူများသည်. . လူလိမ် ဟု သတင်းစကား ပျံ့နှံ့သွားချိန်တွင် လုပ်ကိုင်စားသောက်၍ မရအောင် ပျက်စီးခြင်း သို့တိုင်လေတော့သည်. . .
လူမှုဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်၌ စကားတည်သူ၊ ကတိတည်သူဟူ၍ အများလက်ခံခြင်းခံရသူများမှာ မည်သည့် အလုပ်အကိုင်ကိုပင် လုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိသည် လူအများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချ တန်ဖိုးထားခြင်းကို ခံရသည်. . "လူသေသော်လည်း နာမည်မသေ" ဆိုသည်မှာ ထိုသူမျိုးဖြစ်သည် .
လူ့သိက္ခာကို တန်ဖိုးထားကြသူများသည်. . စကားကို လက်လွတ်စပယ် ပြောလေ့မရှိကြ . . . လူ့အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာလေလေ. . စကားအပြောအဆိုကို သတိထားရလေလေ ဖြစ်သည်. . .
သို့ဖြစ်ရာ မိမိကျင်လည်ရာ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် မိမိ၏ တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသော သတင်းစကားသည်. မိမိအပြုအမူပေါ်တွင် မူတည်၍ အစဉ်အဆက် ပြောစမှတ် ကျန်နေမည်သာ ဖြစ်သတည်း.....
ရေးသားသူ poemflower at Thursday, May 14, 2009 11 comments:
"ငါးပါးသီလတွင် သူ့အသက်သတ်ခြင်း၊ ခိုးခြင်း၊ လိမ်ပြောခြင်း၊ သူ့သားမယားကို ပြစ်မှားခြင်းတို့မှာ တစ်ပါးသူကို ထိခိုက်သည် . . . အရက်သောက်ခြင်းမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အရက်ကိုသောက်ပြီး အေးအေးနေလျှင် တစ်ပါးသူကို မထိခိုက်နိုင်ပါလျက် ဘာကြောင့် အရက်ကို ငါးပါးသီလထဲ၌ ထည့်ထားရပါသနည်းဟု" ဒါယကာ တစ်ယောက်က သင်္ဂဇာ ဆရာတော်ကြီးအား မေးလျှောက်သည်. . .
ဆရာတော်ကြီး က "တစ်ခါက အဘိုးကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်. . နွားလည်း ဆယ့်လေးငါးကောင်ရှိတော့ မြေးကလေးက နွားကျောင်းရတယ်. . ညကျလို့ရှိရင် အဘိုးကမြေးကို ငါ့မြေးရ ချိုထောင်လေးကို ချည်ပြီးပြီလား လို့ အမြဲမေးလေ့ရှိသတဲ့ "ညမှာ နွားခြံပိတ်တိုင်း မေးတော့ မြေးလေးက "အဘိုးကလည်း ချိုထောင်ကလေးချည်း မေးနေတာပဲ ချည်ပြီးပါပြီဗျ" လို့ ပြောသတဲ့
ဒီတော့ အဘိုးက ဓဟဲ့ င့ါမြေးရဲ့၊ တခြားနွားတွေက ကိစ္စမရှိဘူး . . အဲဒီ ချိုထောင်ကလေးကို မချည်ရင် သူက တခြားအိပ်နေတဲ့ နွားတွေကို လိုက်လိုက်ပြီးဝှေ့တယ်ကွယ့်. . .ဒီတော့ တခြားနွားတွေ အိပ်ရေး ပျက်တယ်ကွယ့်. . . လို့ပြောသတဲ့ဓ. . ဒီတော့ ဓဒကာကြီးရေ ဘုရားက သူရာမေရိယဆိုတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ချိုထောင်ကလေးကို အချည်ခိုင်းရှာတယ်. . . သူ့ကိုလွှတ်ထားလိုက်ရင် သူလိုက်ပြီးဝှေ့တာနဲက တခြားသီလတွေ အိပ်ရေးပျက်မှာပေါ့ ဒကာကြီးရဲ့" လို့ပြောသတဲ့. . .
အရက်ကလေးကို စပြီးသောက်မိပြီဆိုလျှင်. ချိုထောင်ကလေး လွတ်သွားပြီ၊ ချိုထောင်ကလေးက ချိုထောင်ကြီးကို နိုးတော့မည်. . . အရက်မူးလာလျှင် ဆင်ခြင်ညဏ်စွမ်းအား ကျဆင်းလာမည်. . . သည်ထက်ပိုပြီးပျော်ချင်သည်. . . ဆေးခြောက် ..နံပါတ်ဖိုး အစသဖြင့် ချိုထောင်ကြီး နိုးလာပြီ. . . . .
တခြားသီလတွေ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကကို ဝှေ့ပြီ လိမ်ရမလား . . လိမ်မည် . . . ခိုးရမလား ခိုးမည်. . . သတ်ရမလား . . . သတ်မည် သူ တစ်ပါး သားမယားကို ကြံစည်ရမလား . . အိုဘာမဆို အကုန်လုပ်တော့မည်. . .
ထို့ကြောင့် ချိုထောင်ကလေးကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ. . . .
ရေးသားသူ may16 at Wednesday, May 13, 2009 15 comments:
ရေးသားသူ may16 at Monday, May 11, 2009 8 comments:
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, May 09, 2009 11 comments:
ကဆုန်လသည် အပူဓာတ်လွန်ကဲသောလဖြစ်သည်. . . မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များ ခန်းခြောက်ချိန် ဖြစ်သည်. . သို့ရာတွင် လကုန်ပိုင်းတွင် မုတ်သုံလေဆော်သွေး၍ မုန်သုံမိုး တစ်ပြိုက်၊ နှစ်ပြိုက် ရွာသွန်းတတ်သည်.. . မိုးရေ စွတ်စိုသော မြေပြင်သည် တစ်မူထူးခြားသော မြေသင်းနံ့ သင်းပျံ့ပျံ့ကို ရှူရှိုက်ရသောလ ဖြစ်သည်.. ရှေးမြန်မာများကိ ကဆုန်အတွင် မြေသင်းပျံ့ပျံ့ မိုးနှံ့နှံ့ဟု ဆိုရိုးပြုခဲ့ကြသည်. .
ကဆုန်လကို မြန်မာမှုအရ ပြိသာရာသီခေါ်၍ ထိုလတွင် စန်းပြည့်နက္ခတ်မှာ ၀ိသာခါနက္ခတ်ဖြစ်သည်.. ယှဉ်သော တာရာမှာ တံငါတာရာဖြစ်သည်. . . ရာသီရုပ်မှာ နွားထီးရုပ်ဖြစ်သည်. . . ရာသီပန်းကား စံကားပန်းဖြစ်၍ ရာသီပွဲ တော်ကား ညောင်ရေသွန်းပွဲတော် ဖြစ်သည်. . . .
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာတို့သည် ကဆုန်လပြည့်နေ့ ထူးမြတ်သောနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ယူစကြသည်. . . . . "ဗျာဒိတ်၊ဖွားမြင်၊ ဗောဓိပင်၊ စံဝင်နန်းနိဗ္ဗာန်" ဆိုသည်နှင့် အညီ ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် ဗုဒ္ဓ၀င်ဆိုင်ရာ ထူးခြားသော သမိုင်းမှတ်တိုင်များ ရှိခဲ့သည်. . . .
(၁) ဘုရား အလောင်းတော် သုမေဓာရှင်ရသေ့သည် ဒီပင်္ကရာဘုရားရှင်ထံမှာ ဘုရားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု နိယတဗျာဒိတ်တော် ခံယူရရှိသည့် နေ့သည် ကဆုန်လပြည့်နေ့ဖြစ်သည်။
(၂) မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်၊ သောကြာနေ့၊နံနက်၊ တစ်ချက်တီးအချိန်၊ ၀ိသာခါနက္ခတ်နှင့် စန်းယှဉ်၍ ကပိလ၀တ်ပြည်နှင့် ဒေ၀ဒေဟပြည်အကြား လုဗ္ဗိနီသာမော အင်ကြင်းတောဝယ် . . . သုဒ္ဓေါဓနမင်းကြီး၏ ရှုမငြီးသော ကြင်ယာတော် မယ်တော်မာရာ၏ ၀မ်းကြာတိုက်မှ ဘုရားလောင်းတော်ကို မီးရှူးသန့်စင် ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သည်. . .
(၃) ဘုရားလောင်းတော်သည်. . သက္ကရာဇ် ၁၀၃ ခုနှစ၊်ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်တော်မူပြီး ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်. . .
(၄) ကာဠု၊ ယသော်၊ ညီတော်၊ ဆန္ဒ၊ ကဏ္ဍက၊ သောဏ္က၊ ဗုဒ္ဓဟေဆိုသည်နှင့် အညီ ဖွားဖက်တော်ခုနှစ်ပါးတွင် ပါဝင်သော ညောင်ဗုဒ္ဓဟေ (ဗောဓိပင်) သည်လည်း ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် ပင် ပေါက်ရောက်ခဲ့သည်.
(၅) သက္ကရာဇ် ၁၄၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့၌ ၀ါတော် ၄၅၀ါ ၊ သက်တော် ၈၀ ၌ဘုရားရှင်သည် နယ်မာလာတိုင်း ၊ကုသိနာရုံရှိ အင်ကြင်းတောဝယ် ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်. . .
မြတ်စွာဘုရား ဘုရား အဖြစ်သို့ရောက်တော်မူသည်မှာလည်း ဗောဓိညောင်ပင်ရင်း တွင်ပင်ဖြစ်သည်.
မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်ပတ်သက်နေသော ဗောဓိညောင်ပင်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးများအဖို့ အလေးအနက် ကြည်ညိုလေးစားဖွယ်ဖြစ်လာသည်. . . ရာသီဥတုအရလည်း ဆီလျော်သော ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်ကို ကျင်းပသည်ဟု ယူဆရပါသည်. . .
ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်ကို ပဒေသရာဇ်ခေတ်မှသည် ယနေ့ထက်တိုင် ကျင်းပနေဆဲဖြစ်သည်. . . ဤသို့ ဗုဒ္ဓနေ့ကို အကြောင်းပြု၍ မြို့ကြီးပြကြီးမှသည်. . . တောလက်ကျေးရွာဇနပုဒ်အထိ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော် ကျင်းပခြင်းသည် ဘာသာယဉ်ကျေးမှုအတွက် ကောင်းမြတ်သော အစဉ်အလာဖြစ်ပါသည်...
ရေးသားသူ may16 at Thursday, May 07, 2009 11 comments:
မိသားစုပိုင် ယာမြေတစ်ခုကို ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် အတူတကွ လုပ်ကိုင်ကြသည်. . . တစ်ယောက်က အိမ်ထောင်သည်. . သူ့မိသားစုက ကြီးသည်. . နောက်တစ်ယောက်က လူပျိုလူလွတ်
တစ်နေကုန်အလုပ်လုပ်ပြီး လျှင် လယ်ယာထွက်သီးနှံများနှင့် ရောင်းချရသည့် အမြတ်အစွန်းများကို ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် ညီတူမျှတူခွဲဝေယူကြသည်. . .
တစ်နေ့မှာတော့ တစ်ကိုယ်တည်းသမား စဉ်းစားသည်. . . "လယ်ယာထွက်သီးနှံတွေ အကျိုးအမြတ်တွေကို ညီတူညီမျှ ခွဲဝေနေတာ မသင့်ဘူး ငါက တစ်ယောက်တည်းသမား . . ငါ့လိုအပ်ချက်ကနည်းနည်းလေး " သည်လိုတွေးက ညစဉ်ညတိုင်း သူ့စပါးကျီမှ စပါးတစ်အိတ်စီ ထမ်းကာ ကွင်းပြင်ကို တိတ်တဆိတ် ဖြတ်သန်းပြီး သူ့ အကိုအိမ်က စပါးကျီထဲ သွားထည့်သည်. . .
သည်အတွင်း အိမ်ထောင်ရှင် အစ်ကိုကြီးကလည်း စဉ်းစားသည်. . . "သီးနှံတွေ၊ ၀င်ငွေတွေကို ညီတူမျှတူ ဝေယူနေကြတာ မမှန်ဘူး . . . ငါက အိမ်ထောင်သည်. . ငါ့မှာ အသက်ကြီးတဲ့အချိန် ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ မိန်းမရှိတယ် သားထောက် သမီးခံရှိတယ်. . . ငါ့ညီမှာ က တစ်ယောက်တည်း မမာရေး မကျန်းရေးဆိုရင် စောင့်ရှောက်မယ့် သူမရှိဘူး" . . ဟူ၍တွေးကာ ညတိုင်း စပါးတစ်အိတ်စီထမ်းပြီး သူ့ညီစပါးကျီထဲ သွားထည့်သည်. . . .
သည်လိုနှင့် နှစ်ညချီ၍ ကြာလာသည်. . ကိုယ့်ကျီထဲ ကစပါးတွေ ညစဉ်ထုတ်ယူနေပါလျက် လျော့နည်းသွားခြင်း မရှိသည်ကို နှစ်ယောက်လုံးပင် စဉ်းစာမရဖြစ်နေကြသည်. . .
သို့သော မှောင်မည်းမည်း ညတစ်ည၌ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်ဝင်တိုက်မိကြသည်. . သည်တော့မှ ပင် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ကြည့်ကာ ဖြစ်ပျက်နေပုံ အလုံးစုံကို နှစ်ဦးသား သိမြင်သွားကြသည်. . .
စပါးအိတ်တွေပစ်ချကာ ညီအစ်ကိုတွေ တစ်ဦးကို တစ်ဦး တင်းတင်းဖက်ထား လိုက်မိကြ လေသည်. . .
ဖေမြင့် ( More Sower's Seeds စာအုပ်မှာ အမည်မသိစာရေးသူ၏ Two Brothers )
ရေးသားသူ poemflower at Thursday, May 07, 2009 10 comments:
ဖြည့်းဖြည်းလာလေ အို. . . . အဆွေ (Slow Dance)
သင်စောင့်ကြည့်ဖူးပါသလား. . .
ဒါမှမဟုတ် မိုးပေါက်များ မြေကြီးပေါ်
ဟိုဟိုဒီဒီပျံသန်းရာကို လိုက်၍ကြည့်ဖူးပါသလား . . .
ငေးမောခံစားကြည့်ဖူးပါသလား . .
သင့်အရှိန်ကလေးကို လျှော့ချလိုက်ပါဦး. . .
သင် ကနေသောအကကို မြန်မြန်ကြီးမကပါနဲ့. . .
အချိန်ကသိပ်မကျန်တော့ဘူး . .
ဂီတသံစဉ်ကလေးက ပြီးဆုံးသွားတော့မယ်. . .
လိုက်ပြီးကြည့်ဖူးပါသလား . .
မေးတဲ့အခါမှာ ပြန်ဖြေသံကို ကြားမိရဲ့လား . .
လဲလျောင်းရင်း မင်းခေါင်းထဲမှာ နောက်တစ်နေ့
လုပ်ရမယ့် အလုပ်ဝတ္တရားတွေကို တန်းစီပြီး
တွေးတောနေမိတယ် မဟုတ်လား . .
သင့်အကကို မြန်မြန်ကြီးမကလိုက်ပါနဲ့. .
ဂီတသံစဉ်လေးက ပြီးဆုံးသွားတော့မယ်. .
သင့်သားလေး ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတစ်ခုကို
သင်က အလောတကြီးနဲ့မို့ သူ့မျက်ဝန်းထဲက
၀မ်းနည်းနေတာလေးကို မတွေ့မြင်မိဘူး မဟုတ်လား . .
သင်က သူ့ကို တွယ်တာခင်မင်မှုနဲ့ နှုတ်ဆက်ဖို့
သတိထားမိရဲ့လား . .
သင့်အရှိန်လေးကို လျှော့ချဖို့ မုချလိုအပ်နေပြီ. .
သင့်အကကို မြန်မြန်လေး မကလိုက်ပါနဲ့
အချိန်က သိပ်မရှိတော့ဘူး . .
ဂီတသံစဉ်ကလေး က ပြီးဆုံးခါနီးနေပြီ. .
အရှိန်ပြင်းစွာနဲ့ သွားမယ်ဆိုရင် သင်ရောက်သွားတဲ့အခါ
တစ်ဝက်လောက်ပဲ ရတော့မှာအမှန်ပါ. .
သင့်တစ်နေ့တာ ကို ပူပင်သောကတွေနဲ့
ဖွင့်မကြည့်ဘဲ အဝေးကို လွှင့်ပစ်လိုက်သလို
ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်. . .
ဘ၀ဆိုတာ အပြေးပြိုင်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး . .
တေးသံစဉ်လေး မပြီးဆုံးခင် ဂီတသံလေးကို
ခံစားနားဆင်ကြည့်ကြပါစို့. . .
(ဒီကဗျာလေးကိုရေးသူဟာ ကုလို့မရတဲ့ ကင်ဆာရောဂါကို ခံစားနေရပြီး ဘ၀မကူးခင်မှာ လူ့လောကမှာ ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်မရတော့ပေမယ့်. . သူများကိုတော့ ဘ၀ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိနေသွား စေချင် ပါတယ်.)
ရေးသားသူ may16 at Tuesday, May 05, 2009 11 comments:
မိတ်ဆွေတု မိတ်ဆွေယောင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရိပ်များနှင့်တူလေသည်. . . သာယာတောက်ပသော နေရောက်ထဲ၌ ကျွန်ုပ်တို့ လျှောက်လှမ်းနေသည့်အခါ တပူးတွဲတွဲရှိနေ၏ . . . မှောင်ရိပ်ထဲသို့ ကျွန်ုပ်တိုို့ရောက်သွားသည်နှင့် တပြိုင်နက် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ခွဲခွာထွက်ခွာသွားလေတော့သည်. . . .
အကြောက်တရားဟူသမျှကို မိမိထံ၌ မိမိဖာသာ သိမ်းထားပါ. .
ရဲစွမ်းသတ္တိ ရှိမူမှန်သမျှကို တခြားသူများအား မျှဝေပေးလိုက်ပါ. .
ပျော်ရွှင်မှုမှန်သမျှအတွက် နာကျင်မှုများကို အဖိုးအခအဖြစ်ပေးရလေသည်. . .
စစ်မှန်သော ပျော်ရွှင်မှုနှင့် လွဲမှားသော ပျော်ရွှင်မှုများအတွက်မူ ခြားနားချက်များ ရှိနေလေသည်. .
စစ်မှန်သောပျော်ရွှင်မှုအတွက် အဖိုးအခကို အရင်ပေးရသည် . . .
လွဲမှားသော ပျော်ရွှင်မှုအတွက်မူကား အဖိုးအခကိုပေးပြီးမှ ပေးရလေသည်. . .
အကြောက်တရားက ရှေ့တန်းရောက်သောအခါ ဆင်ခြင်တုံတရားသည် နောက်ဆုတ်သွားတတ်လေသည်. .
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, May 02, 2009 12 comments: